EGWU DỊ NA STEETI EDO – hoo!haa!!
Ahụ ịma jijiji ka anyị nụrụ na ọ dị n’Odighi dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Ovia North-East na steeti Edo. Ihe butere nke a bụ na-enwere kepu kepu na ndi nche ehi egbuela mmadụ abụọ n’obodo ahụ nke otu onye n’ime ha bụ onye isi ụka (pastor), aha ya bụ Pius Eromosele nke ụlọ ụka Church of God Mission dị na Benin City bụ isi steeti Edo.
Ekwuru na-egburu onye isi ụkaa mgbe enwenwụghị ike ịkwụ ndi nche ehia ego dị nde naira anọ ha sịrị ka enye ha tupu na ha ahapụ nwokea.
Ka-ana-ekwu nkea, ahụkwara ozu onye nke amabeghị aha ya, egburu tugbunye n’ime ili emighị emi n’ime ugbo. Ahụrụ ozu nwoke a mgbe ndi ọgba-nta nankwa ndi nche obodo (vigilante) bara ọhịa ịchọ onye isi ụka ahụ bụ Pius.
Diọkpara onye isi ụka a bụ Dọkịnta Richard Eromosele kwuru na-atọrọ nna ya n’abalị iri abụọ na itolu n’ọnwa atọ n’afọa. Mgbe ahụzịrị ozu nwa amadịa, na Tusdde, abalị atọ nke ọnwa anọ, ọ malitela rewe ure.
Diọkparaa sịrị na ọ fọrọ nwa obere ihe ka ume kupu ya mgbe ya hụrụ ka esi gbue nna ya ka-ana-egbu anụmanụ. Ọ sịrị na mgbe ndi gburu nna ya gbachara ya egbe, na ha bịara were mma gbuwasịa nna ya isi.
Nwoke a sịrị na mgbe ya gara meere ndi uwe ojii mkpesa, na ha sịrị ya ga kpesara ya ndi ngalaba na-ahụ maka ndi ntọrị. N’igbu okwu nkenke, onweghị ihe ndi uwe ojii mere iji zopụta nna ya.
Ọ gara n’ihu kwue na ndi ọrụ nna ya mmadụ abụọ bụ ndi ọ kpọrọ Kinsley nakwa Akpan bụ ndi ji ọkpa zọrọ ọnwe ha mgbe ndi nche ehi a wakporo ha, kọwara ka mmiri siri baa n’opi ụgbọgọrọ tupu egbue nna ya.
Ọsịrị na ihe dika izu ụka abụọ gara aga, ka nne ya na-akpọ nna ya n’ekwe ntị mana nna ya anaghị aza. N’okwu ya, nne ya kpọtere nna ya aka tupu ọ zaa ya ma gwa ya na ya nọ n’aka ndi nche ehi n’ugbo ya.
N’okwu ya, n’ogea ka ndi nche ehi ji were ekwe ntị ya kwue ka ewetara ha nde naira anọ. Ọ siri na ha yọrọ ndi nche ehia maka ebere, nke ka nke na oge ahụ danyere n’oge ezumike, nke na ha enweghị ike inweta ụdị egoa. Ọ sịkwara na ya gara gwa ndi uwe ojii mgbe nkea na-aga mana ha gwara ya ka ọ kpọtụrụ ha ma ndi ahụ kpọọ ka ewetara ha ego. Ọ sị na mgbe ya mere nkea, na onweghị ihe ya nụrụ.
Ọ sịrị na ndi ọrụ nna ya abụọa gbalagara sịrị na ndi nche ehi ahụ sịrị na ọbụ nna ya ha bụ ndi na-egbu ehi ha.
Ọ sịrị na ọbụ ka emekatara nkea ka ya jiri yọọ ndi ogba nta na ndi nche ka ha nyere ya aka chọọ nna ya.
Ọ yọrọ ndi nchekwa dị n’aka ka ha gbata ọsọ wetara ndi ọrụ ugbo obodo Odighi nchekwa.
Previous Post: ADEBOYE ADỌKWAALA AKA NA NTỊ ỌZỌ MEGIDE ỊCHỌ DI NA NWUNYE N’ỌBA OZI IKUKU “SOCIAL MEDIA “
Next Post: ỤMỤ NIGERIA BI NA UK EKWUELA NA HA ACHỌGHỊ BUHARI IZỌKWA ỌKWA ONYE ISI ALA ỌZỌ